“Paris Saint-Germain waxay ku guuleysan doontaa Champions League” – Nasser Al-Khelaifi – Gool FM
“Paris Saint-Germain waxay ku guuleysan doontaa Champions League” – Nasser Al-Khelaifi
Dajiye August 24, 2020
(Lisbon) 24 Agoosto 2020. Nasser Al-Khelaifi oo ah milkiilaha kooxda reer France ee Paris Saint-Germain ayaa balan qaaday inay ku guuleysan doonaan koobka UEFA Champions League mustaqbalka.
Bayern Munich ayaa markeedii LIXAAD ee taariikhda ku guuleysatay koobka Champions League, kaddib markii ay guul dirqi ah kaga qaaday kooxda Paris Saint-Germain 0-1, kulankii fiinalka ahaa ee ka dhacay garoonka The Estadio da Luz.
Shabakada “Goal” ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Nasser Al-Khelaifi kaddib ciyaarta, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan dareemeynaa murugo, ma iloobeyno inaan sameynay waxyaabo waa weyn xilli ciyaareedkan, ciyaarta finalka waxaan ku guuldarreysanay 0-1, laakiin waxaan awood u yeelan karnay inaan dhalino labo ama seddex gool”.
“Ciyaarta ayaa aheyd mid aad u dhow, aad ayaan ugu faraxsanahay ciyaartoydeyda, waxaan qaadanay xilli ciyaareed fiican iyo tartan fiican oo halkan ah, waxaan heysanay wax walba oo aan ugu baahneyn inaan guuleysano, laakiin tani waa kubadda cagta”.
“Waxaan ka shaqeyn doonnaa in aan ku guuleysano koobkan xilli ciyaareedka soo socda, waxaan kuu balan qaadayaa inaan ku guuleysan doono Champions League, ciyaartoyda iyo qof walba waxay soo baxayaan madaxooda oo kor ah, sababtoo ah waxay sameeyeen wax walba”.
“Waxaan la ciyaarnay kooxdii weynayd ee Bayern Munich. Iyaga waa mid ka mid ah kooxaha ugu fiican adduunka, waxaan ku guuldarreysanay 0-1, tani waa kubadda cagta, waa inaan wanaajinaa waxyaabaha yaryar, kani waa finalkeena ugu horreeyay, iyo kii 11-aad ee kooxda Bayern”.
“Waxaan qaadanay xilli ciyaareed fiican, waxaan gaarnay finalka, waxaana ku guuleysanay afar koob, waxaan dareemeynaa murugo, waxaan dareemeynaa niyadjab, laakiin waxaa jira dhinac kale ee wanaagsan”.
“Waxaan soo laaban doonnaa maalin un, waxaana ka shaqeyn doonnaa sidii aan ugu guuleysan lahayn Champions League, ma aheyn wax fudud inaan gaarno finalka, laakiin waxaan ku dadaalaynaa sidii aan ugu guuleysan lahayn koobkan”.
“Waxaan doonayaa inaan ku guuleysto Barcelona xilli ciyaareedka soo socda” – Philippe Coutinho
Thomas Tuchel oo sharaxaad ka bixiyay sababta ka dambeysay guuldarradii ay kala kulmeen Bayern Munich